तिज म्यूजिक अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
तिज म्यूजिक अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७१, मंगलवार
काठमाडौं, ३ भाद्र । सांस्कृतिक पर्व तीजका अवसरमा गीत संगीतलाई प्रोत्साहन मिलोस् र तीजका गीतले र त्यसका श्रष्टा/सर्जकले प्रोत्साहित हुने मौका पाउन भन्ने धेयका साथ आयोजना गरिन लागेको तीज म्यूजिक अवार्ड –०७१ को उत्कृष्ट ५ मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाली गीत÷संगीत संस्कृतिले धन्यधान्य छ । खासगरी हाम्रा रितिस्थिति, परम्परा एवं संस्कृतिले गीत–संगीतलाई मौलिक त बनाएको छ नै त्यहिँ माथी यसको विकासमा समेत प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेकै छ । हाम्रा चाड पर्व एवं सांकृतिक परम्पराले गीत–संगीतलाई मौलिक रुपमा जोगाइराखेको छ । यस्तै मध्येको एउटा सांस्कृतिक पर्व हो ‘तीज’ । तीजमा लोक सांस्कृतिक संगीतले प्रशस्त खेल्ने मौका पाउँछ । मौलिक संगीतको विकासमा तीज पर्वमा खासगरी महिलाका आवाजहरु गुञ्जिन्छन् । आजभोली बदलिँदो परिस्थितिमा पुरुष स्वर पनि प्राथमिकतामा आउन थालेको छ । भलै यसमा क्रिया–प्रतिक्रिया आए पनि वर्तमान तीज संगीत महिला मात्रैको नरहेर पुरुष स्वरमा पनि गुञ्जिन थालेको छ । तीजका गीत संगीत सांस्कृतिक परम्पराको नाममा विकृतितिर समेत धकेलिन लागेको आरोप लागिरहन्छ । आरोप–प्रत्यारोप जे भए पनि तीज संगीत फस्टाउँदो भने पक्कै छ । यहि तीजको परम्परालाई कायम राख्दै बजाज इन्टरटेन्टमेन्टले तीज म्युजिक अवार्ड –०७१ को आयोजना गर्न लागेको तीज म्यूजिक अवार्ड ०७१ का अध्यक्ष बी.एस. लामिछाने (राजु बजाज) द्वारा प्रेषित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सांस्कृतिक पर्व तीजका अवसरमा ती गीत संगीतलाई प्रोत्साहन मिलोस् र तीजका गीतले र त्यसका श्रष्टा÷सर्जकले प्रोत्साहित हुने मौका पाउन भन्ने धेयका साथ यो अवार्डको आयोजना गरिन लागेको बताइएको छ । तीज म्यूजिक अवार्ड – ०७१ आगामी भाद्र १० गते एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरि सम्पन्न गरिँदैछ । उक्त अवसरमा तीजको सांस्कृतिक प्रस्तुति सहित सहभागीलाई दर खुवाएर रिति एवं परम्पराको सम्मान गर्दै कार्यक्रमलाई मौलिक एवं भव्य बनाइने बताइएको छ ।
तीज म्यूजिक अवार्ड सम्पन्न गर्नका निमित्त मोहन निरौला, प्रदीप उदय, दिनेश डिसी, नारायण रायमाझी, दुर्गा रायमाझी, आर.सी. कोइराला एवं चन्द्र शर्मा सम्मिलित ७ सदस्यिय सल्लाहकार समिति बनाइएको छ भने यो अवार्डको सदस्य–सचिव सुमन बैरागी, कार्यक्रम संयोजक सन्तोष श्रेष्ठ, निर्देशक शान्तिप्रिय र अध्यक्ष भने बी.एस. लामिछाने (राजु बजाज) रहेका छन् ।
तीजका अवसरमा खासगरी मौलिक गीतलाई नै आत्मसात गरिएको रबिकृतजन्य गीत जति नै चर्चामा आए पनि अवार्डको माध्यमबाट प्रोत्साहित नगरिएको आयोजकले बताएका छन् । मुलत मौलिक गीत वा हाम्रो मान्यता तथा परम्परा कायम राखेका गीतलाई नै आधार मानेर हामीले उत्कृष्ट ५ सार्वजनिक गरेका छौं विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक गरिएको उत्कृष्ट ५ मनोनयन यसप्रकार छ –
१.उत्कृष्ट तीज गीत भिडियो सम्पादन
प्रविन रेश्मी मगर – आमाले दिएको
प्रविन भट्ट – अहिलेको तीजमा
देवेन्द्र शाह – वर माग्छु शिवजी
विष्णु शर्मा – झल्को माइतीको
निशान घिमिरे – तीजको आयो लहर
२.उत्कृष्ट तीज गीत भिडियो छाँयाकार
सुदिप बराल – वर माग्छु शीवजी
दुर्गा पौडेल – झल्को माइतीको
राजेश घिमिरे – मलाई त कति मज्जा
ज्ञानेन्द्र शर्मा – म त फुरुक्कै
शिवराम श्रेष्ठ – च्वाप्प म्वाइ खाँउला
३.उत्कृष्ट तीज गीत भिडियो मोडल (पुरुष)
विजय थापा – आशिर्वाद माग्छु
बब्वु थापा – वर माग्छु शिवजी
महेन्द्र गौतम – लाजैले मरिन्छ
शंकर वि.सी – मेलम्चीको पानी
नरेश विर सिंह – आगो प¥यो
४.उत्कृष्ट तीज गीत भिडियो मोडल (महिला)
दिपाशा वि.सी – अहिलेको तिजमा
नीता ढुंगाना – वर माग्छु शिवजी
पार्वती राई – हाम्रा बाउका ज्वाइँले
पुर्णिमा श्रेष्ठ – मेलम्चीको पानी
सगुन शाही – वर्षै र दिनको
५.उत्कृष्ट तीज गीत भिडियोे निर्देशक
शंकर वि.सी – आमाले दिएको
प्रकाश भट्ट – आशिर्वाद माग्छु
गोविन्द राई – तीजको आयो लहर
कपिल लामा – वर्षै र दिनको
६.उत्कृष्ट तीज गीत एरेञ्जर
झलक संगीतम् – अहिलेको तीजमा
विनोद वाजुराली – छम्म छम्म छम्म
वि.वि. अनुरागी – पिरको व्यथा सारा
अर्जुन पोखरेल – झल्को माइतीको
महाराज थापा – तीजको आयो लहर
७.उत्कृष्ट तीज दोहोरी गीत गायक
खुमन अधिकारी – आशिर्वाद माग्छु
तिलक वली – हङ्कङको सारी
सुरेन्द्र सुनार – मेलम्चीको पानी
रमेशराज भट्टराई – सानुमाया
किरण बावु पुन – लभ म्यारिज
८.उत्कृष्ट तीज दोहोरी गीत गायिका
रमिला न्यौपाने – आशिर्वाद माग्छु
पुर्णकला वि.सी÷उमा श्रेष्ठ – बुढा आधा आधा
सरिता कार्की – लाजैले मरिन्छ
लक्ष्मी ढकाल – सानुमाया
शान्ति सुनार – सत्य कसम
९.उत्कृष्ट तीज गीत शब्द
गोविन्द प्रसाद उपाध्याय – आमाले दिएको
हरि विष्ट – टिपन सकिन खाइन वरिलै
गायत्री थापा – माइती देश
कुमार विवाहित – तिजको आयो लहर
गणेश चौलागाई – वर्षै र दिनको तीजै
१०.उत्कृष्ट तीज गीत भाका(लय)
हरि लम्साल – आमाले दिएको
हरि विष्ट – अहिलेको तीजमा
बिमल डाँगी – छम्म छम्म
पुस्कल शर्मा – नरोए आमा
सुरेश अधिकारी – तिजको आयो लहर
११.उत्कृष्ट तीज गीत गायिका
टीका पुन – अघिपछि भुल्छु आमा
स्वरुपा रसाइली – पिरको व्यथा सारा
माण्डवी त्रिपाठी – रातो सारीे
देवीका बन्दना – म त फुरुक्कै
सुनीता दुलाल –तीजको आयो लहर
१२.उत्कृष्ट तीज गीत
गैरा बारि – हरि विष्ट÷गंगामाला फिल्मस्
आमाले दिएको – शोभा त्रिपाठी÷सितारा म्यूजिक
तिजको आयो लहर – सुनिता दुलाल÷कमलादेवी डिजिटल
झल्को माइतीको – मञ्जु पौडेल÷आशिष म्यूजिक
गायत्री थापा – वर माग्छु शिवजी÷शिवदर्शन डिजिटल